Muuri News Network » Akhriso: Musharax Cabdalla Xuseen Cali oo jeediyay Khudbad soo jiidata xildhibaanada golaha shacabka.
Akhriso: Musharax Cabdalla Xuseen Cali oo jeediyay Khudbad soo jiidata xildhibaanada golaha shacabka.
Mudane Xildhibaan Musharax Gudoomiye Kuxigeeenka 2-aad ee Baarlamaanka Cabdalla Xuseen Cali; isla markaana ah Wasiir ku xigeenka gaashaandhigga dowladda federaalka Soomaaliya ayaa qudbad cajiib ah ka jeediyay Qudbadihii musharixiin Loogu talagay ee maalinimadii shalay lagu soo gebagabeeyay Magaalada Muqdisho.
Musharaxa Cabdalla Xuseen Cali ayaa qudbadiisu ku soo qaatay Qodobo dhowr ah oo soo jiitay dareenka Xubnaha Baarlamaanka Golaha shacabka; waxaana ka muuqatay kalsooni ballaaran marka la eego qaabka uu hadalka ujeedinayay; waxyaabihii uu kahadlay waxaa ka mid ahaa Amaanka xildhibaanada; dhaqaalaha; meelmarinta Sharciyada muhiimka u ah dalka Soomaaliya.
Musharaxa ayaa u ballanqaaday xildhibaanada hadii ay codkooda siiyaan in uu ka shaqeyndoono in xildhibaankasta uu helo gaari iyo xafiis uu ugu shaqeeyo dadka iyo deegaanada uu matalo.
Sidoo kale Cabdalla Xuseen Cali ayaa ballan qaaday in uu kashaqeyndoono horumarinta in la meelmariyo sharciyada muhiimka u ah dib usoo kabashada dalka Soomaaliya sida Sharciga Dib udhiska ciidanka qaranka Soomaaliya.
Wuxuu sidoo kale ballanqaaday in waqtiga ay xildhibaanada shaqeeyaan in uu ilaalindoono si waxbadan loo qabto afarta sano ee soo socoto.
Musharaxa ayaa u muuqday shalayto mid kalsooni ku qabo in uu ku guuleysankaro jagada gudoonka baarlamaanka waana dhalinyaro howlkar ah kuna firfircoon xagga hogaaminta.